R W Cabdiweli: Sababta xilka loga qaaday Sanbaloolshe waxeyey aheyd ku takrifal awoodeed – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya C/wali Sheekh Axmed oo ku sugan magaalada London ee dalka Birtian ayaa sheegay in sababtii Golaha Wasaiiradu xilka uga qaadeen agaasimihii Nabad Sugidda Soomaaluya, C/llaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) ay aheyd ku tagrifal awoodeed iyo xarig uu kula kacay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Federaalka ah.
R W Cabdi Weli Sheekh oo u warramay BBC ayaa sheegay in xil ka qaadista Sanbaloolshe timid kadib markii ay u dulqaadan waayeen xarig lagula kacay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda ka tirsan iyo hadalo kulul oo uu madaxda ku weeraray.
“Sababta keentay in ninkaas xilka laga qaado waxey aheyd qaabka uu howsha u qabanayo oo aan markaa loo arkeyn inay caawineyso siyaasada dowladda oo ah in la helo adeeg xaga nabadgelyada oo degan” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare C/wali.
“Waxaa ka mid ahaa sababta xil ka qaadista dhaqamo xarig ah oo xildhibaan lagula kacay iyo madaxda dowladda oo si toos ah loo weeraro hadal ahaan iyo waxyaabo aan aad ugu habooneyn hey’adaha noocaas” ayuu yiri R/wasaare C/weli.
Taliyaha Nabad Sugidda Soomaaliya, C/llaahi Sanbaloolshe ayaa sida la sheegay amar uu soo saaray lagu xiray xildhibaan ka tirsan baarlamaanka, kaasoo lagu magacaabo Xilshibaan Shiiraar, sidoo kale wuxuu xiray agaasimaha Radio Muqdisho oo ku hadla afka dowladda Soomaaliya, C/raxiim Ciise Caddow.
7-dii bishan September 2014 ayay aheyd markii Golaha Wasiirada ay si lama filaan ah ah xilka uga qaadeen C/llaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe oo ahaa Agaasimaha Hay’adda Nabad Sugodda, kaasoo 9-kii bishii July 2014 Madaxweynaha u magacaabay xilkaas.
Maamulka Juba oo ku baaqay in la gargaaro dadka abaaruhu saameeyeen